Kismaayo oo Laga Cabsi Qabo Inay Isku Badesho Xerooyin Ciidan iyo Goobo Dagaal Warbixin |
Xili magaalo xeebeedka Kismaayo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan Dowladda Soomaaliya ciidamada Kenya ciidamada Raaskambooni iyo kuwa maleeshiyo beeleeda ayaa waxaa kusoo qul qulaya ciidamo kale oo horleh.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxaa jira ciidamo badan oo kusoo fool leh magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose.
Ciidamadan kusoo wajahan Kismaayo ayaa qaar kamida waxa ay soo gaareen duleedka Kismaayo waxaana ay saldhigyo ka sameynteen duleedka magaalada.
Sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo kusoo wajahan magaalada Kismaayo kuwaasi oo saacadaha soo socda kasoo dhaqaaqi raba qeybo kamida gobolka Gedo ciidamadan kasoo bixi rabo Gedo ayaa waxaa la sheegay inay hoos tagaan maamulka gobolka Gedo.
Inkastoo ciidamadaasi ay yihiin kuwo soo gaaray duleedka Kismaayo iyo kuwo kusoo dhaqaaqi raba ayaa waxaa jira ciidamo badan oo tababar ugu soo idlaaday dalka Kenya oo iyagana kusoo jeeda Kismaayo.
Dadka sida dhow ula socda xaaladaha gobolada Jubooyinka iyo Gedo ayaa sheegaya in Kismaayo ay noqon doonto xero ciidamo kala duwan ku hardamaan hadii aan wax laga badelin sida wax ay ku socdaan.
Magaalada Kismaayo ayaa haatan waxaa ku sugan siyaasiyiin kala aragti ah kuwaasi oo kasoo wada jeeda gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Sida ay ku soo waramayaan Goob Joogayaal ku sugan Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose Ciidamadii dhawaan Gaaray Duleedka Magaalada Kismaayo ayaa maanta gudaha u soo galay Magaaladaasi taasi oo keentay kala shaki soo kala dhex gala labada dhinac ee ciidamada dowladda iyo Ururka Raas kaambooni ee Maamula Magaaladaasi.
Ururka Raaskaambooni ayaa la sheegay in Saraakiisha Kenya ay ku wargeliyeen in Magaalada ay soo galeen Ururka Al Shabaab inkastoo Saraakiisha hogaamineyso Ciidamada Tagay Kismaayo ay ka dhadheceyeen Ciidamada Kenya in ay yihiin Ciidamo dowladda Federaalka Ka tirsan.
Isgaarsiintii Magaalada ayaa caawa Hawada ka maqan taasi oo ay jareen maleeshiyada Raas kaambooni iyadoo dhammaan xaafadaha Magaaladaasi lagu arkayo Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Ururka Raaskaambooni.
Ugu dambeyntii iyadoo Kismaayo ciidamo badan oo kala duwan ay ku sugan yihiinqaar kalena ay kusoo wajahan yihiin ayaa walwal xoogan waxa uu soo food saarey dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo kuwaasi oo ka cabsi qaba in isku dhacyo ay ka bilowdaan magaalada gudaheeda.